Fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana - inona no tokony hotadiavina
Mitsangatsangana miaraka amin'ny ankohonana | fialan-tsasatra
Manomàna làlana ho an'ny fitsangatsanganan'ny fianakaviana
Inona no ilaina amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana?
Ilaina amin'ny fitsangatsanganana amin'ny fianakaviana
Fitsangatsangana amin'ny fahavaratra
Mitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana amin'ny ririnina
Ny fifantohana dia ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny fianakaviana
Safidy famolavolana miovaova
Misy karazana fialam-boly isan-karazany azon'ny fianakaviana manontolo atao. Ny fianakaviana izay tia mandany fotoana any ivelany dia afaka mampiasa ny fotoana malalaka andehanan'izy ireo mitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana. Ny fitsangantsanganana ataon'ny fianakaviana dia azo dinihina mandritra ny vanim-potoana rehetra.
Mitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana
Amin'ny fitsangatsanganana dia afaka manararaotra mandany fotoana amin'ny natiora ireo fianakaviana manan-janaka ary mahafinaritra be. Ny fitsangatsangana dia mety ho fiovana tsara ho an'ireo olona mandany fotoana be ao an-trano, ary mety hanjary liana kokoa amin'ny fitsangatsangana aza. Rehefa mitsangatsangana, ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fianakaviana dia manana fotoana handray anjara amin'ny fitsangatsanganana. Io dia ahafahan'ny fianakaviana mandany fotoana malalaka miaraka amin'ny natiora.
Mitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana - © SolisImages / Adobe Stock
Mandany fotoana miaraka amin'ny rivotra madio
Ny fitsangatsangana dia fomba tsara handaniana fotoana kely amin'ny rivotra madio. Amin'izao fotoana izao dia olona maro no mandany ny ankabeazan'ny fotoanany ao an-trano. Ny natiora dia manana zavatra maro atolotra izay tena mendrika jerena ary hita amin'ny fitsangatsanganana. Ny fotoana amin'ny rivotra madio miaraka amin'ny fianakaviana dia azo ampiasaina hiaina fotoana mahafinaritra amin'ny fitsangatsanganana. Na izany aza, alohan'ny hanombohan'ny fitsangatsangana dia misy zavatra maro kasaina hatao.
Voalohany indrindra, ny fianakaviana dia tokony misafidy làlana mety amin'ny tsirairay amin'ny fianakaviana. Avy eo ny fianakaviana dia tokony hieritreritra ny zavatra tiany hoentina miaraka aminy mandritra ny fitsangatsanganana. Ny fotoana fiakarana dia tokony ho voafidy tsara ihany koa. Rehefa dinihina tokoa, ny toetr'andro dia mitana andraikitra lehibe hatrany amin'ny fitsangatsanganana toy izao. Raha vantany vao vita ny fiomanana rehetra dia afaka manomboka ny fitsangatsanganana ao amin'ny fianakaviana.
Raha handeha hitsangatsangana miaraka amin'ny ankohonanao manontolo ianao dia tena zava-dehibe ny làlana. Indrindra raha mandray anjara amin'ilay fitsangatsangana ny ankizy kely kokoa, dia tokony hofidiana lalana izay tsy dia sarotra loatra. Amin'izany fomba izany dia ahafahan'ny mpianakavy tsirairay avy mamita tsara ilay fitsangatsangana.
Mba hahombiazan'ity dia tsy maintsy alamina izay lalana tokony hofidina mandritra ny fitsangatsanganana alohan'ny hanombohana ny fiakarana. Rehefa dinihina tokoa, dia misy làlana fitsangantsanganana marobe, samy manana ny haavon'ny fahasahiranany avy. Ny famafana mora dia matetika ihany koa ho an'ny ankizy ary mety amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo.
Mazava ho azy fa làlana fitsangatsanganana mety no tokony ho hita aloha. Misy torolàlana manokana momba ny dia an-tongotra amin'izany. Ny vaovao mifandraika dia azo jerena amin'ny Internet ihany koa. Raha vantany vao vita ny fikarohana làlana fitsangatsanganana mety dia zava-dehibe ny fanangonana ireo fitaovana ilaina, satria zavatra vitsivitsy no ilaina mandritra ny fitsangatsangana.
Tsy dia an-tongotra ny fitsangatsangana. Noho io dia misy karazana fitaovana ilaina amin'ny fitsangatsanganana rehetra. Voalohany indrindra, zava-dehibe ny misafidy kiraro mety amin'ny fitsangatsanganana, satria zava-dehibe ihany koa ny kiraro ahazoana aina sy mety amin'ny fampiasana eny ivelany.
Ny fandehanana amin'ny kiraro an-dalambe dia mety ho reraka be avy eo ary hahatonga ny tongotrao haratra rehefa mandeha ny fotoana. Noho io antony io dia tsara ny anaovan'ny mpianakavy tsirairay manao kiraro mety. Ny akanjo sahaza dia tokony hatao ihany koa arakaraka ny toetr'andro.
Raha làlana sarotra kokoa no safidiana, ny tehina mandeha dia mety hanamora ny lalana. Satria matetika ny zavatra samy hafa no entina am-pandehanana, tsara ny mitondra kitapom-batsy miaraka aminao, izay ahafahan'ny mpianakavy mitahiry ireo zavatra tadiavin'izy ireo hiakarany an-tongotra ary noho izany dia tsy mila mitondra izany eny an-tanany izy ireo.
Na izany aza, ny kitapom-batsy mavesatra dia mety ho tonga mavesatra be rehefa mihazakazaka. Manoro hevitra anao noho izany ny hitondra entana miaraka aminao izay tena ilaina. Misy zavatra sasany izay mety ho tena ilaina amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana ary noho izany dia matetika no mahita toerana ao anaty kitapo kitapo.
Andro iray eo amin'ny natiora dia afaka mitondra traikefa maro. Noho io antony io dia mety ilaina ny mitondra fakan-tsary miaraka aminao. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny maka sary vitsivitsy ary hahazoana antoka fa azo sary amin'ny sary ireo hetsika ireo. Ny fakantsary fakana sary dia mety tena ilaina amin'ny fitsangatsanganana ataon'ny fianakaviana.
Raha mikasa fitsangatsangana lava kokoa ianao ka mankany amin'ny faritra tsy fantatry ny mpianakavy dia misy dikany ny fananana sari-dia an-tongotra miaraka aminao. Matetika io dia afaka misoroka ny làlana marina tsy ho very tsy ho hitan'ny masontsika. Ny sakafo koa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitsangatsanganana.
Mazava ho azy fa azo atao koa ny mitsidika trano fisakafoanana na trano fivarotana an-trano ny fianakaviana hanatanjaka ny tenany any. Na izany aza, misy dikany ny manangona sakafo kely ao anaty kitapo, izay hoentina hiakatra ianao. Indrindra amin'ny andro mafana amin'ny fahavaratra, zava-pisotro be dia be no tokony ho raisina ho an'ny mpianakavy rehetra.
Sandwiches misokatra dia tsakitsaky tsara ho azy eo anelanelany. Sandwich vita haingana, ary tsy mila toerana be ao anaty kitapo. Ho fanampin'izany, ny lanjan'ny mofo roa dia ambany dia ambany. Noho izany, ny sandwich na ny horonana dia sakafo tsara ho an'ny fitsangatsanganan'ny fianakaviana.
Ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana dia mazava ho azy fa zavatra manokana foana. Miankina amin'ny vanim-potoana, misy zavatra samihafa azo atao amin'ny fitsangatsanganana toy izany.
Indrindra amin'ny fahavaratra dia mahafinaritra ny mivoaka ivelany amin'ny natiora sy ny fitsangatsangana. Amin'ny fahavaratra dia misy ny tombony azo amin'ny fitsangatsanganana amin'ny andro miaraka amin'ny fianakaviana mandritra ny andro maro. Na izany aza, amin'ny andro avo be ny mari-pana, dia mety ho fanandramana ratsy ihany koa ny fitsangantsanganana.
Andro tsara amin'ny fitsangantsanganana amin'ny vanim-potoana fahavaratra dia tsy tokony ho mafana loatra. Mazava ho azy, na dia amin'ny fahavaratra aza dia mety hitranga indraindray ny orana. Noho io antony io dia misy dikany ny fijerena ny tatitra momba ny toetrandro amin'ny andro kasaina hanaovana ny fitsangatsanganan'ny fianakaviana, mba hahitana raha misy ny vintana manomboka ny orana amin'ny andro irina hanaovana fitsangatsanganana. Amin'ny fahavaratra, ny mpandeha an-tongotra dia manana fotoana hiaina ny natiora amin'ny famirapiratany rehetra.
Rehefa dinihina tokoa, dia ny faritra maro izay tena tsara tarehy jerena, indrindra amin'ny fahavaratra, ary ny fitsangantsanganana dia manome anao fotoana hiaina maro karazana tontolo andro ao anatin'ny iray andro. Miaraka amin'ny hiran'ny vorona amin'ny fahavaratra, mahafinaritra miaraka indroa amin'ny fianakaviana ny fitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana.
Noho ny toetrandro mahafinaritra amin'ny fahavaratra, maro ny olona mahita fa tena mora ny mihazakazaka, midika izany fa mazàna izy ireo dia afaka mandroso haingana tsy misy olana. Ny toetr'andro tsara dia mety hahafinaritra rehefa mitsangatsangana. Rehefa mitsangatsangana amin'ny andro misy hafanana mafana ianao, dia misy dikany fa misotro tsiranoka betsaka toy ny rano ny olona ao amin'ny fianakaviana.
Ny satroka amin'ny lohanao dia manome fiarovana amin'ny masoandro. Ny solomaso solomaso dia afaka miaro ny maso amin'ny taratry ny masoandro. Raha misy ankizy kely ihany koa amin'ny fitsangatsangana dia tsara ny hisafidianana làlana ho an'ilay fitsangatsangana izay manome alokaloka betsaka ary hampangatsiatsiaka toy izany.
Misy dikany ny fisorohana ny olona ao amin'ny fianakaviana tsy tokony handeha mandritra ny fotoana lava amin'ny masoandro mirehitra. Raha ilaina izany, ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana dia afaka manosotra ny tenany amin'ny alokaloka amin'ny masoandro mba hiarovana ny hoditra amin'ny masoandro. Mazava ho azy fa tsy ny fahavaratra ihany no mety amin'ny fitsangatsanganana ataon'ny fianakaviana.
Na dia amin'ny ririnina aza dia azo atao ny mandeha an-tongotra ny fianakaviana, satria ny tontolon'ny ranom-boaloboka koa dia manintona sy mahaliana.
Alohan'ny hanombohana ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina dia tsara ny hamaky indray ny tatitra momba ny toetrandro, mba ho voaomana amin'izany fomba izany raha misy toetr'andro ratsy. Ilaina manokana io amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina, satria mety hitranga hatrany hatrany fa ny toetr'andro ratsy dia manaitra ny mpandeha mandritra ny diany.
Satria mangatsiaka be matetika amin'ny ririnina, dia tokony hitafy akanjo mafana ny mpianakavy mba tsy hijanona ho mangatsiaka mandritra ny fitsangatsangana any ivelany. Palitao mafana, satroka ary mazava ho azy ny fonon-tànana roa hitazomana ny tananao ho mafana dia tsy tokony hohadinoina rehefa mitsangatsangana amin'ny ririnina.
Zava-dehibe koa ny fanaovana kiraro azo antoka amin'ny ririnina, indrindra amin'ny vanim-potoana mangatsiaka. Ireo kiraro ireo dia tokony hanafana ny tongotra ary hitazona ny rano tsy hiditra ao anaty kiraro. Rehefa dinihina tokoa, amin'ny fitsangatsanganana ataon'ny fianakaviana amin'ny ririnina, dia tsy fahita matetika ny fivezivezin'ny fianakaviana amin'ny tany rakotra lanezy na fotaka. Ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina dia mitaky ny hanaovana fitafiana mafana ny mpianakavy, fa ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina dia mety, satria matetika ny tany mahafinaritra no manome toerana mahafinaritra.
Ny fianakaviana izay te ho natiora ary tsy azon'ny hatsiaka dia afaka miaina fotoan-dehibe sy sary mahafinaritra amin'ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina. Marihina fa ny fitsangatsangana indraindray mety haharitra ela kokoa amin'ny ririnina, satria azo atao ny mitazona ny lanezy ary handroso somary miadana kokoa noho ny nomanina tany am-boalohany.
Amin'ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina miaraka amin'ny fianakaviana, dia mazava ho azy fa hevitra tsara ny miala sasatra ary manafana kely rehefa misy ny fotoana mety. Ohatra, ny trano fisakafoanana dia azo ampiasaina amin'ny fisotroana mafana. Aorian'ny fanamafisana toy izany dia afaka mitohy ny fitsangatsangana.
Ny fitsangatsanganan'ny fianakaviana dia ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny ankohonana. Ny fitsangatsangana dia fomba tsara iray hanalavitra ny fiainana andavanandro mampiady saina. Ny rivotra madio sy ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny ankohonana dia mety hampiala sasatra ary hanome fotoana tsy hay hadinoina.
Indrindra rehefa manam-potoana kely hanarahana hetsika rehetra ny fianakaviana, ny fitsangatsanganana an-trano dia fotoana mety hanamafisana ny firaisan-kina ao anatin'ny fianakaviana.
Mazava ho azy fa misy fiomanana sasantsasany tsy maintsy atao alohan'ny fitsangatsanganan'ny fianakaviana, saingy ny ezaka dia mety hahomby, satria ny fitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana dia midika ho fotoana mampihomehy izay hahatsiarovan'ny fianakaviana fatratra amin'ny tranga maro.
Ny fitsangatsanganana dia tsy voatery hidika hoe mandehandeha amin'ny faritra samihafa hatrany ny fianakaviana. Fa kosa, ny fitsangatsanganana ataon'ny fianakaviana dia azo ampiasaina ihany koa mba hisafidianana toerana hahalavorariana ny fianakaviana amin'ny fialam-boly isan-karazany, ka ny lalana mankany amin'ny toerana fitsangatsanganana dia miavaka amin'ny fiandrasana fatratra.
Mandritra ny fitsangatsanganana dia afaka manao zavatra amin'ny natiora ihany koa ny fianakaviana ary hahafantatra tsara ny manodidina azy ireo. Ny fihirana hira fitsangantsanganana dia fomba iray koa ahafahana mandany fotoana mandritra ny fitsangantsanganana. Na ny lalao kely aza eny an-dalana dia manome ny fotoana handaniana ny fotoana mihazakazaka mba tsy hankaleo.
Ny làlana fitsangantsanganana, izay mitarika ny fahitana maro, dia tena mety amin'ny fijanonana kely hitsidihana ireo toerana manintona. Ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana dia azo noforonina tamin'ny fomba maro, mba hahafahan'ny mpianakavy tsirairay miala voly mandritra ny fitsangatsanganana miaraka.
Fialantsasatra miaraka amin'ny fianakaviana
Fitsidihana bisikileta miaraka amin'ny fianakaviana
Boky fandinihana ho an'ny fianakaviana
Karaiba | Dia fitsangatsanganana
Fialantsasatra amin'ny toeram-piompiana | fialan-tsasatra
Fialan-tsasatra amin'ny fahasalamana | fialan-tsasatra
Fitsangatsanganana amin'ny fialan-tsasatra | Aiza no handeha hanao vakansy
Fitsangatsanganana any Alemana sy Eropa | fialan-tsasatra
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. Jona 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fialam-boly & fialamboly, Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatraKeywords Fitsangatsanganana amin'ny fianakaviana, fialan-tsasatra, mandeha, fitsangantsanganana
indray Lahatsoratra taloha: Tsy amin'ny toe-tsaina ho an'ny akaninjaza
more Lahatsoratra manaraka: Bibilava toy ny biby
Fialantsasatra amin'ny fotoanan'ny Corona - nefa mitandrema!
Jamba lamba - TSY MISY hotafiko aho!
Maninona ny ankizy no tsy maintsy milalao
Fiakarana miakatra manohitra ny tsy fisian'ny hetsika
Ankizy - mianatra resy amin'ny lalao
Fironana ny miantsena amin'ny Internet - fa rehefa firavaka ve no resahina?
Famoronana asa tanana miaraka amin'ny ankizy
Fikarakarana zavamaniry trano | fisaka
Famonoana tsy misy hena | Mihinana zava-pisotro
Amporisiho ny fahaizan'ny ankizy
Snacking - inona ary ohatrinona no avela?
Inona no azontsika ianarana avy amin'ny zanatsika?
Bathtub | Fiainana sy fahasalamana
Fiainana ekolojika sy maharitra | fiainana
Mamaky tantara an-tsary - tantara an-tsary ataon'ny ankizy
Mofomamy miendrika proteinina - sakafo mahavelona
Fiaraha-miasa mahasamihafa ny taona
Balkon, zaridaina & zavamaniry (2)
Fampianarana, akaninjaza & sekoly (20)
mihinana sy misotro (5)
Fianakaviana & fiaraha-miasa (9)
fialantsasatra ho an'ny daholobe (1)
Fialam-boly & fialamboly (9)
Vola, vola ary asa (5)
Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena (9)
Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatra (11)
Trano sy trano (4)
Lohahevitra momba ny fomba fiaina ho an'ny ray aman-dreny